जसपाको बलियो खम्बा ढल्यो, कसरि घट्यो घटना ? — Imandarmedia.com
जसपाको बलियो खम्बा ढल्यो, कसरि घट्यो घटना ?
काठमाडौं। प्रदेशमा जसपाको बलियो खम्बा ढलेको छ। जनता समाजवादी पार्टी सुदूरपश्चिम देखि केन्द्र सम्म खैलाबैला मचिएको छ। कारण बने जनता समाजवादी पार्टी जनता समाजवादी पार्टी जसपाका सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव जनक आउजी।
चुनावको मुखमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव जनक आउजी एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । उनलाई शनिबार एमाले सचिव तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्टले पार्टीमा स्वागत गरेका हुन् ।
पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा एमाले पोलिटव्युरो सदस्य तथा कैलाली इन्चार्ज नारदमुनी राना, एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं कैलाली सह-इन्चार्ज सन्तोष शर्मा, एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्ष दामोदर भण्डारी, एमाले कैलाली अध्यक्ष रतन थापालगायतको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
एमाले प्रवेश गर्दै आउजीले वर्तमान सन्दर्भमा एमालेले मात्रै देश र जनताको हितमा काम गर्ने भएकाले यो पार्टीमा प्रवेश गरेको बताए । उनले आगामी दिनमा एमालेका नीति अनुरूप आफ्ना क्रियाकलापहरू अघि बढाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाए।
यसअघि जसपाका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष कृष्ण चौधरी पनि पार्टीबाट राजीनामा दिँदै माओवादी प्रवेश गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले कैलालीका स्थानीय तहमा सत्ता गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल नगर्ने भएको छ।
जसपाले पाँच दलीय गठबन्धन तोडेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी कैलाली, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी कैलाली र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च कैलालीसँग तालमेल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
शनिबार कैलालीको धनगढीमा चार दलले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने बताएका हुन्।पाँच दलीय गठबन्धनले अन्य दलसँग चुनावी तालमेल गर्न नपाइने नीति बनाएपनि जसपाले कैलालीमा तोडेको हो।
त्यस्तै,प्यूठानको नौबहिनी गाउँपालिकामा पाँचदलीय सत्ता गठवन्धन भत्किएको छ। यहाँ राष्ट्रिय जनमोर्चाविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले चुनावी गठबन्धन गरेका छन्।
सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले चुनावी तालमेल गरेपछि जनमोर्चा एक्लिएको हो ।सत्तारुढ तीन ठूला दलले आफूहरुलाई चुनावी गठबन्धनमा सहभागी नगराएको जनमोर्चा प्यूठानका सल्लाहकार एवं नौबहिनी गाउँपालिका इन्चार्ज राम पहाडीले बताए ।
‘बैठकमा बोलाएर कांग्रेस र माओवादीले छुट्टै बैठक बस्छौं भनेपछि नोट अफ डिसेन्ट लेखेर हामी बाहिरियौं’, पहाडीले भने, ‘पुरानै अनुहार दोहोरिने गरी भागबन्डा गरेको खबर छ । हामीलाई पुनः बैठकमा बोलाएनन् ।
नौबहिनी गाउँपालिकामा यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि जनमोर्चाविरुद्ध कांग्रेस र माओवादी मिलेर लडेका थिए । वडा नम्बर १ स्याउलीवाङ समाजवादीलाई र तीन–तीन वटा वडा कांग्रेस र माओवादीलाई भागबन्डा गरिएको बताइएको छ ।
फोप्लीको वडामा विवाद रहँदा सहमति भएको छैन ।गाउँपालिका अध्यक्षमा बहालवाला अध्यक्ष शिव रिजाल र उपाध्यक्षमा घनबहादुर बुढालाई दोहोर्‍याउने सहमति भएको छ । अध्यक्ष रिजाल कांग्रेस र उपाध्यक्ष बुढा माओवादी केन्द्रका हुन् ।
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नौबहिनीमा कांग्रेस र माओवादीविरुद्ध जनमोर्चा र एमालेले पनि तालमेल गरेका थिए । जनमोर्चाका पहाडी यसअघि एमालेसँगको तालमेलमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष उठेका थिए ।
जनमोर्चाले वडा नम्बर ४ र ६ को अध्यक्ष माग गरेपछि सहमति हुन नसकेको कांग्रेसका जिल्ला सदस्य एवं नौबहिनी गाउँपालिका अध्यक्ष
शिव रिजालले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने जो सुकैलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। रुपन्देहीका सञ्चारकर्मीहरूसँग शनिबार आयोजित अभिमुखीकरणमा आयोगले आचारसंहिता प्रधानमन्त्रीदेखि आम नागरिकसम्म सबैले पालना गर्नुपर्ने।
र कहीं कतैबाट उल्लंघन भए कारवाही हुने प्रतिबद्धता जनाएको हो। आचारसंहिता उल्लंघन भए त्यसबारे जानकारी गराउन र आचारसंहिता पालनामा सचेत गराउन पनि आयोगले सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरेको छ।
कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगका आयुक्त सगुन शम्शेर जबराले निर्वाचन आचारसंहिता कसैले पनि उल्लंघन गर्न नहुने बताए ।आचारसंहिता उल्लंघनबारे सम्पूर्ण कुरा आयोगले मात्र अनुगमन गर्न सक्दैन, उल्लंघन भए सञ्चारमाध्यमले निगरानी गरेर जानकारी गराउनुपर्ने हुन सक्छ
उनले भने ।पत्रकारिता क्षेत्रले पनि आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिँदै उनले सुरक्षा निकाय जस्तैं सञ्चार माध्यमको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहेको बताए ।नागरिकले सबैभन्दा बढी विश्वास मिडियाको गर्ने र मिडियानै नागरिकमा सूचना पुग्ने पहिलो माध्यम भएकाले त्यसलाई अझ बढी विश्वस्त बनाउन उनले आग्रह गरे ।
उनले निर्वाचनको माहोल सिर्जना गर्न मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकोमा जोड दिए । आयोग संविधान ऐनमा रही नयाँ कार्य गर्न गर्न खोजिरहेको उनले बताए ।
सूचना आयोगका पूर्व आयुक्त यशोदा तिम्सिनाले निर्वाचनमा सञ्चारकर्मीहरू मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारबाट बच्नुपर्ने बताइन्। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव विक्रम खड्काले निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुँदैन भन्ने भ्रम चिर्न यस्ता कार्यक्रमले सहयोग गर्ने बताए।